जीवनको सेरोफेरो: चेत खुलाउने उपाय
चेत खुलाउने उपाय
एक पटक एक बृद्धले एउटा युवकलाइ भने - लौन बाबु, यो इनारबाट पानी झिकिदेउ । उक्त युवकले माटोको घैंटो इनारमा खसालेर डोरीले तान्न मात्र के लागेको थियो, बृद्धले उसको टाउकोमा प्याट्ट हानेर भने, "याद गर ! पानी तान्दा फेरी घैंटो फुट्ला नी ।" त्यही समय त्यहाको बाटो हुँदै हिड्ने पैदल यात्रुले यो घट्ना देखेर बृद्धलाइ भने –" जब त्यो युवकको गल्ती नै थिएन तर पनि तपाइले उसलाइ किन हिर्काउनु भयो ?" बृद्धले मुस्काउदै भने
–"यदी मैले यो चेतावनी घैंटो फुटेपछी दिएको भए त्यसबाट कुनै फाइदा हुने थिएन।"
एक क्षण पनि ढिलो किन ?
एक पटक जंगलमा भयंकर आगो लाग्यो, जंगलका एक ठुलो भाग नै जलेर खरानी भयो । त्यही जंगलमा एक जना गुरूको आश्रम थियो । जब जंगलको आगो निभ्यो उनले आफ्ना शिष्यहरूलाइ बोलाइ उनीहरूलाइ आज्ञा दिए कि जंगललाइ फेरी हराभरा बनाउनका लागी देवदारका विरूवा लगाउने व्यवस्था गर । एक जना शंकालु शिष्यले शंका जाहेर गर्यो – गुरूदेव देवदार त हुर्कननै बर्षौं लाग्छ । यदी त्यसो हो भने हामी एक क्षण पनि नगुमाइ तुरून्त बृक्षारोपण थालनी गर्नु पर्छ – गरूले आदेश दिँदै भने ।
Posted by Bishal Gautam at 2/26/2012
Labels: Story, निती कथा